Muuse Biixi: Raalligelintii Madaxweyne Farmaajo siiyay Somaliland waa soo dhaweynayaa! - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Muuse Biixi: Raalligelintii Madaxweyne Farmaajo siiyay Somaliland waa soo dhaweynayaa!
Madaxweynaha Somaliand Muuse Biixi Cabdi oo jeedinayay Khudbadda sanadlaha waxa uu kaga hadlay Xaaladda Somaliland, Safarkii uu ku tagay Itoobiya ee uu kula kulmay Madaxweyne Farmaajo iyo socdaalka Madaxweynaha DFS ee la sheegay in uu ku tagayo Hargeysa.
Muuse Biixi waxa uu tilmaamay in muhiimadda ay siiyeen sidii Ururka Midowga Afrika ay kala hadli lahaayeen qorshahooda ah in lasiiyo aqoonsi kana go’aan Soomaalida inteeda kale sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu intaa ku daray in muddo dheer ay ku jireen sidii ay ugu dhabeyn lahaayeen hadafkodoa ah in ay gooni u istaagaan, tallaabada lagu gaari karana uu yahay in xiriir wanaagsan ay la sameeyeen Ururada caalamiga iyo Dowladaha Daneeya Geeska Afrika.
“Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ah hogaamiyaha dal dad badan kunool yahay ayaa igu casuumay shirkii Afrika, waxaana uu ii sheegay in aan la kulmayo Madaxweyne Farmaajo, isla markaana uu doonayo in uu kala dhexgalo labada dhinac, waana ku taageeray oo waan aqbalay” ayuu yiri Muuse Biixi.
Waxa uu tilmaamay in aanu waqti badan loo helin faah-faahin dheeraad ah oo ay wada galaan Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweyne Muuse Biixi, waxaana uu sheegay in Dowladaha Sweden iyo Turkiga oo kaashanaya Jabuuti ay daneynayaan wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland.
“Turkiga iyo Sweden waxa ay la xiriireen Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ka dalbadeen in aanu dhinacna uga harin sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland” ayuu yiri Madaxweyne Muuse Biixi.
“Raalli gelintii Madaxweyne Farmaajo ee 13-kii bishaan siiyay Somaliland waxa ay igu ahayd arrin kedis ama lama filaan ah, waana soo dhaweynayaa, balse waxa ay ahayd in uu ka reebo halka uu ka yiri dhinacyadii jabhadaha ee hubka qaaday” ayuu yiri Muuse Biixi Cabdi.
Muuse Biixi Cabdi Madaxweynaha Somaliland waxa uu sheegay in aysan is qabaneyn raalli gelinta Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wararka sheegaya in uu safar ku tagayo Magaalada Hargeysa.
Previous articleHaweeney Muqdisho ku dishay Gabar 14 Sano jir aheyd oo Shaqaalle ama Jaariyad u aheyd
Next articleSomalia: Keep The Game Going